Momba anay - GTMSMART Machinery Co., Ltd.
GTMSMART Machinery Co., Ltd. dia orinasa teknolojia avo lenta mampiditra R&D, famokarana, varotra ary serivisy. Ny vokatra lehibe dia ahitana milina Thermoforming, Machine Thermoforming plastika SY Machine Thermoforming Cup,Industrial vacuum mamorona milina, milina fanaovana kaopy taratasy, milina fanaovana lovia taratasy, milina fanaovana takelaka taratasy Sns
Manatanteraka tanteraka ny rafitra fitantanana ISO9001 izahay ary manara-maso tsara ny fizotran'ny famokarana manontolo. Ny mpiasa rehetra dia tsy maintsy mandalo fiofanana matihanina alohan'ny hiasa. Ny fizotran'ny fanodinana sy ny fivoriambe rehetra dia manana fenitra ara-teknika siantifika henjana. Ny ekipa mpanamboatra tena tsara sy ny rafitra kalitao feno dia miantoka ny fahamarinan'ny fanodinana sy ny fivoriambe, ary koa ny fahamarinan-toerana sy ny fahatokisana ny famokarana.
GTM dia manana ekipa ara-teknika matihanina natokana ho an'ny fikarohana, fampandrosoana ary famokarana fitaovana avo lenta, mitsitsy angovo ary mandeha ho azy amin'ny fametahana takelaka plastika sy fitaovana mifandraika amin'izany. Afaka manome ny mpanjifa amin'ny tolotra feno sy misaina: ao anatin'izany ny milina sy ny bobongolo famolavolana sy ny famokarana, fametrahana sy ny fametrahana, fanofanana mpiasa, sns, ary nandalo ny CE fiarovana certification.
Isika dia mifototra amin'ny toe-tsaina mitady fahamarinana avy amin'ny zava-misy sy ny toe-tsaina miezaka ny tsara indrindra, tandremo tsara ny fampandrosoana fironana ny plastika fonosana milina, manambatra ny mandroso teknolojia famokarana ny plastika fonosana milina ao an-trano sy any ivelany sy ny filan'ny mpanjifa, ary miezaha hanome ny mpanjifanay amin'ny milina famonosana plastika avo indrindra sy vokatra fitaovana; Ny vahaolana tsara indrindra sy feno mialoha ny fivarotana, fivarotana, serivisy aorian'ny varotra ary fanohanana.
Ny mpanjifanay (Products in customer place)